နေအပူရှိန်ပြင်းပြီးနောက် ရုတ်တရက် မိုးရွာလာခြင်းကြောင့် မှရိုးကုန်းကျေးရွာရှိ သဲနုန်ြးေ?? - Yangon Media Group
မှရိုးကုန်းကျေးရွာတွင် မြေအက်ကြောင်းကြီးများ ဖြစ်ပွားရခြင်းမှာ ယင်းမြေကြီးမှာ သဲနုန်းမြေဖြစ်ပြီး နေအပူရှိန်ပြင်း ကာ ရုတ်တရက်မိုးရွာလာခြင်း ကြောင့်ဖြစ်ကြောင်း မင်းဘူးခရိုင် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးထံမှသိရသည်။ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး ပွင့်ဖြူ မြို့နယ် ရွှေလှေကျေးရွာအုပ်စု မှရိုး ကုန်းကျေးရွာတွင် ဇွန် ၂ရက် ည ပိုင်းမိုးရွာသွန်းပြီးနောက် ကျေးရွာ ရှိ အိမ်ခြေ ၂ဝခန့် အိမ်ဝိုင်းများတွင် မြေအက်ကြောင်းကြီးများ ဖြစ်ပေါ် လာခဲ့သဖြင့် အဆိုပါကျေးရွာသို့ ဇွန် ၅ ရက်က မင်းဘူးခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေး မှူးဦးစန်းဌေးနှင့် မန်းရေနံမြေမှ ဘူမိဗေဒအင်ဂျင်နီယာ ဆည်မြောင်း အင်ဂျင်နီယာတို့ သွားရောက်လေ့ လာကြည့်ရှုခဲ့ကြသည်။
”ကျွန်တော်နဲ့ မန်းရေနံမြေ ဘူမိဗေဒအင်ဂျင်နီယာ ဆည်မြောင်း အင်ဂျင်နီယာတို့ သွားရောက်လေ့ လာခဲ့တယ်။ နေပြင်းပြီး မိုးရွာချ တော့ မြေကြီးက အဲဒီမြေက သဲ နုန်းမြေတွေဆိုတော့ ရေဝင်သွား ပြီး အက်ကွဲကြောင်းဖြစ်တာပါ”ဟု မင်းဘူးခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးစန်းဌေးက ပြောသည်။
မှရိုးကုန်းကျေးရွာမှ မြစ်ကမ်း နံဘေးတွင်ရှိသဖြင့် မြစ်ရေကြီးချိန် မုန်းချောင်းရေကြီးချိန်များတွင် ကမ်း ပါးပြိုမှု အန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်သဖြင့် ပြောင်းရွှေ့ပေးရန် မကွေးတိုင်း ဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ထံ အခြေ အနေတင်ပြပြီး ဆက်လက်ပံ့ပိုးပေး နိုင်ရန် ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ် ကြောင်း ၎င်းင်း၏ပြောကြားချက်အရ သိရသည်။
”ပြောင်းရွှေ့ပေးဖို့က မြေနေရာ မရှိသေးဘူး။ လယ်သမားတွေနဲ့ ညှိနှိုင်းနေတယ်။ မြစ်ရေကြီးချိန် ချောင်းရေတိုးချိန်ဆိုရင်တော့ ကမ်း ပါးပြိုတာတွေဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက်လွတ်တဲ့နေရာရွှေ့ပေးဖို့ တိုင်းအစိုးရ ကို တင်ပြပြီး ပံ့ပိုးမှုတွေဆောင်ရွက် ပေးသွားမှာပါ”ဟု ၎င်းင်းက ပြော သည်။ အဆိုပါအက်ကြောင်းများ၏ အကျယ်မှာ တစ်ပေမှ တစ်ပေခွဲ နီးပါးလောက်ရှိပြီး အနက်မှာ ၁၅ ပေနီးပါး (ဝါးတစ်လုံးထိုးကြည့်ရာတွင် အောက်သို့မရောက်)ခန့် အ နက်ရှိကြောင်း မှရိုးကုန်းကျေးရွာ ရွာခွဲတာဝန်ခံ၏ ပြောကြားချက် အရ သိရသည်။
မကွေးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရ အဖွဲ့ဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာအောင် မိုးညိုက ယင်းဖြစ်စဉ်နှင့်ပတ်သက်၍ ”အိမ်ငါးဆယ်ခန့်ကို အန္တရာယ် ကင်းသောနေရာသို့ အမြန်ရွှေ့ ပြောင်းနိုင်ရေး မင်းဘူးခရိုင်အုပ် ချုပ်ရေးမှူးဆောင်ရွက်နေ”ဟု ၎င်းင်း ၏လူမှုကွန်ရက် Facebook စာ မျက်နှာတွင် အဆိုပါသတင်းအောက် ၌ မှတ်ချက်ပြုခဲ့သည်။
ငွေဒဏ်နှင့် ထောင်ဒဏ်များ ထည့်သွင်းပြင်ဆင်ထားသည့် အလုပ်သမားရေးရာ အငြင်းပွားမှုဖြေရှင်းရေး ?
ရွှေထည်ပစ္စည်းမျိုးစုံ ထည့်ထားသော မီးခံသေတ္တာ အလုံးလိုက် ခိုးယူသူသုံးဦးကို မြဝတီ၌ ဖမ်းမိ
တရားမဝင် ကုန်သွယ်မှုပြုသော မြန်မာထွက်ကုန် ပြောင်းဆန်များ၊ ဂျပန်ကားနှင့် မြန်မာနိုင်ငံသို့